ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန. မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိသည့
ⓘ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန. မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်အချိန်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ရေကြောင်းနှင့် မြို့ပြလေကြောင်းဝန်ကြီး ..
ⓘ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ကော်ပိုရေးရှင်း အမည်များဖြင့် ပြောင်းလဲ၍လည်းကောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍လည်းကောင်း ပြင်ဆင်၍ လုပ်ငန်းဌာနပေါင်း ၁၇ဌာနဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၂၉ရက်နေ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၀/၉၂ အရ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအား အောက်ပါ ဝန်ကြီးဌာန ၃ခုအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
လက်ရှိ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် အောက်ပါဌာန ၅ဌာန ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Wikipedia: ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန